Muxuu ka yiri Gerard Pique wararka la xiriirinaya Coutinho inuu ka tagayo kooxda Barcelona? – Gool FM
(Spain) 07 Agoosto 2019. Daafaca kooxda kubadda cagta ee Barcelona Gerard Pique ayaa door bidaaya in ciyaaryahanka reer Brazil ee Philippe Coutinho uu sii joogo garoonka Camp Nou xilli ciyaareedka soo aadan, laakiin laacibka reer Spain ayaa tilmaamay in go’aanka uusan ku jirin gacantiisa.
Philippe Coutinho ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo kooxda Barcelona, iyadoo ay sidoo kale jiraan warar sheegaya inuu dib ugu laabanayo horyaalka Premier League ee dalka England.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Gerard Pique waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Sida iska cad waxaan doonayaa in Philippe Coutinho uu joogo, laakiin waxaan fahamsanahay inuu sameynayo waxa uu doonayo iyo waxa uu ku faraxsanaan karo”.
“Ilaa iyo maalinta ugu dambeysa ee suuqa, ma ogaan karno bal hadii uu sii joogayo iyo hadii kale, ma ahan go’aankeyga, laakiin waa go’aanka Coutinho iyo kooxda, waxaan rajeynayaa inuu ku farxi doono go’aanka uu qaadan doono” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Gerard Pique.
Kooxda Sao Paulo oo soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Dani Alves, xilli loo xiray lambar cajiib ah... + SAWIRRO